Incorporation uye LLC Mafomu Ekushandisa
Kusarudza Chikwata Chemhando
Kuchengetedza Akabatanidzwa Mabhizinesi
Usati waisa bhizinesi, iwe unofanirwa kuyera mabhenefiti nezvakanakira zvemhando dzakasiyana dzesangano uye mutero kupatsanurwa kweumwe neumwe. Kuongorora zvaunogona kuita nemusoro wenyaya, senge kuchengetedzwa kwechikwereti, kuchinjika, mafomu ehu muridzi, mutero mabhenefiti, zviitwa zvinoshanda uye nezvimwe. Isu takaunganidza yakakwana Nongedzo yeKupinza mune akateedzana ezvinyorwa zvinoenderana zvinokurukura misoro yakasiana uye vachienzanisa mafomu ebhizinesi.
Kusarudza Rudzi Rweboka - Kunzwisisa sarudzo uye kutarisa kune yega bhizinesi chimiro pane kuti ingashanda sei kwauri. Bhenefiti yega yega nekusakosha kunoonekwa uye maitiro ekuyera maitiro anogona kuita ebhizinesi.
Chifukidziro Chemubatanidzwa - Chii icho uye unodzivirirwa zvakadii nekuverengerwa? Ichi chinyorwa chinokurukura chifukidziro chemubatanidzwa uye maitiro ekuchichengeta.
Kudzivirirwa kwemutoro - Isu tinofananidza iyo Corporation uye Yakatemerwa Dhizimusi Kambani pane chengetedzo yemutoro. Dzidza kuti iro bhizinesi dhizaini rinokudzivirira sei iwe neako ako epfuma kubva kune zvebhizimisi zvisungo.
Kufunga Kwemitero - Nzwisisa kuti zvinhu zvakasiyana zvinopa mutero sei. Dzidza apo S Corporation inoshanda zvakanyanya uye nguva yekugara yakajairwa C Corporation. Isu tinofananidza iyo yakatemerwa chikwereti kambani nezvakasiyana mafomakambani pane zvemitero zvakanakira.
Kuteedzera Kwekambani chinhu chinodikanwa nehurumende chemabhizinesi anopindirwa. Aya maitiro akareruka ekubatanidzwa ndeye nzira yekuchengetedza yako yakasarudzika chinzvimbo chepamutemo ndipo panobva kuchengetedzwa kwako kwechikwereti. Kungorekodha zviito uye sarudzo dzegore rebhizinesi, muchimiro chemaminetsi emusangano, ndiyo imwe nzira yekusimbisa chifukidziro chekambani. Isu takaunganidza yakakwana maminetsi emusangano uye zvisarudzo template raibhurari mune izwi doc fomati iwe yaunogona kurodha pasi.
Dzidza maitiro ekuchengetedza ako wega maminetsi emusangano uye zvinyorwa zvemakambani. Makambani Anopindirwa anopa ese ekuteerera ese masevhisi ayo anogona kuchengeta yako bhizinesi kutevedzera nemitemo mune ese makumi mashanu matunhu. Bvunza nezve edu ekutevedzera masevhisi, isu tichabatsira vese vedu vatengi nekuchengetedza kwavo bhizinesi kutevedzera, kubva kufirita pagore zvirevo zveruzivo kusvika kugadzira maminetsi emusangano.
Enda Kumusangano Maminiti uye Corporate Resolutions Template Raibhurari
Dhawunirodha Matemu eMusangano Wegore Negore Matemplate
Dhawunirodha ma Corporate Resolutions Matemplate
Wona Sample Zvinyorwa
IRS - Imwe-mira Bhizimusi Bhizinesi sosi yeruzivo pamusoro pemakambani, makambani anezvikwereti zvishoma, bhizinesi rinozvishandira wega wega uye gedhi remimwe misoro inoenderana.
Mari Uye Kuisa Mari - Ruzivo rwemari uye rwekudyara.
Zvishandiso zveAccounting yebhizinesi diki.